ससफो नेपाल र नयाँ शक्तिले दमकमा संयुक्त उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी रौनक बढाए | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
झापा, ४ असार । झापाको दमकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालले संयुक्त मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
दुवै पार्टीले आज संयुक्त उम्मेद्वारी दर्ता गराएको ससफो नेपालका लिम्बुवान प्रदेश सचिवालय सदस्य कमन देवानले जानकारी दिए ।
दमक नगरपालिकाको मेयरमा सतिश साह र उपमेयरमा गंगा सागर शेर्माको उम्मेद्वारी परेको हो । साह नयाँ शक्ति र शेर्मा ससफो नेपालका उम्मेदवार हुन् ।
त्यस्तै, दमक वडा नम्बर १ मा ससफो नेपालको सेट उम्मेदवार छन् । वडा अध्यक्षमा ओममाया आङ्देम्बे, महिला सदस्य कृश्नकुमारी अधिकारी, महिला दलित सदस्य कल्पना विक, खुल्ला सदस्यमा कुमार राई र पन्चमाया लिम्बू छन् ।
वडा ३ मा डम्बरबहादुर तिम्सिना अध्यक्ष नयाँ शक्तिबाट र खुला सदस्यहरू गंगाप्रसाद दुलाल र नरेन्द्र कुमार शेर्मा ससफो नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका छन् ।
वडा ५ बाट अध्यक्षमा राजु खड्का र दलित महिला सदस्यमा सीता परियार नयाँ शक्तिबाट उम्मेद्वार छन् भने महिला सदस्यमा उमा लिम्बू र खुल्ला सदस्यमा पुष्कर पोख्रेल ससफोबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
वडा ६ बाट सेटमै नयाँ शक्तिले उम्मेद्वारी दिएका छन् । अध्यक्षमा पुष्पराम न्यौपाने, महिला सदस्यमा सुनिता पौदार, दलित महिला सदस्यमा सुनिता राम मोची, खुल्ला सदस्यमा गुड्डुकुमार जैसवालले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
वडा ७ मा ससफो नेपालको सेट उम्मेद्वार उठेका छन् । अध्यक्ष्यमा गजेन्द्र लावती, महिला सदस्य विश्नुकुमारी चेम्जोङ, दलित सदस्य लक्ष्मी सार्की र खुला सदस्य महेन्द्रकुमार सुब्बाको मनोनयन परेको छ ।
वडा ८ मा नयाँ शक्तिको अध्यक्ष उम्मेद्वार उमेश गजमेरको उम्मेद्वारी परेको छ ।
वडा ९ मा ससफो नेपालबाट अध्यक्षमा मिनकुमार लिम्बू, महिला सदस्यमा धनकुमारी कार्की , खुला सदस्यमा रणबहदुर राईको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ ।
वडा १० मा नयाँ शक्तिबाट अध्यक्षमा खगेन्द्र न्यौपानेको उम्मेद्वारी परेको छ । वडा २ र ४ मा ससफो र नयाँ शक्ति दुबैबाट नउठाइएको बताइएको छ । दमकको चुनावी माहोलमा ससफो नेपालले तरंग ल्याएको संयोजक देवानले बताए ।
ससफो नेपालले नयाँ शक्तिलगायत अन्य दलहरूसँग पनि तालमेल गरेर उम्मेद्वारी दिएको बताइएको छ । पहिचान विरोधी एमाले र गणतन्त्र विरोधी राप्रपासँग भने जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहमा तालमेल नगरिएको बताइएको छ ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा ससफोबाट टिकाराम थामी मेयरको उम्मेदवार
Posted by admin on Jun 18 2017. Filed under Breaking News, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry